Indlu yokuPhuma kwelanga ziZilwanyana - Izinto Zobugcisa
Indlu yokuPhuma kwelanga ziZilwanyana
Izazi ngembali azikwazanga ukuchonga ngokuqinisekileyo iNdlu yokuPhuma kwelanga, kodwa nazi iingcamango ezimbini ezaziwa kakhulu:
1) Ingoma imalunga ne-brothel eNew Orleans. 'Indlu yokuPhuma kwelanga' yabizwa ngegama likaMadame uMarianne LeSoleil Levant (okuthetha ukuthi 'Ukunyuka kwelanga' ngesiFrentshi) kwaye yayivulelwe ishishini ukusukela ngo-1862 (ngokuhlala yimikhosi yomanyano) kude kube ngo-1874, xa ivaliwe ngenxa yezikhalazo ngabamelwane. Yayiku-826-830 iSt.
2) Imalunga nentolongo yabasetyhini eNew Orleans ebizwa ngokuba yintolongo yabasetyhini yaseOrleans Parish, eyayinesango lokungena ehonjiswe ngemifanekiso yelanga ekhulayo. Oku kungachaza 'ibhola kunye netyathanga' amazwi kwingoma.
Ingoma iyindabuko yesiNgesi ye-ballad, kodwa ingoma yathandwa njengengoma yomntu waseAfrika-waseMerika. Yabhalwa ngu-Texas Alexander kwii-1920s, emva koko ngamanye amagcisa aquka uLeadbelly, uWoody Guthrie, uJosh White kunye noNina Simone kamva. Yayiyinguqulelo yakhe Izilwanyana zokuqala ukuva. Akukho namnye onokubanga amalungelo kule ngoma, nto leyo ethetha ukuba inokurekhodwa ize ithengiswe ngaphandle kwentlawulo. Amabhendi amaninzi ayigubungela le ngoma emva kokuba iye yabetha Izilwanyana.
Umbhali-mbali wezomculo u-Alan Lomax wabhala ingxelo ngo-1937 ngo intombazana eneminyaka eli-16 egama linguGeorgia Turner . Kule meko, kuyaculwa ngokokuqala, ixesha langoku nemvumi ikhalazela indlela iNdlu yaseLanga esebutshabalalise ngayo ubomi bayo. Kule nguqulo yesiko, umlinganiswa ophambili nokuba ngunongogo okanye ibanjwa. Izilwanyana ziyitshintshe yangcakaza ukuze inguqulelo yazo ibe yelunge ngakumbi kunomathotholo.
Ngomnyaka we-1964, le ngoma yomntu malunga ne-New Orleans brothel yaba yintsimbi ye-transatlantic ye-rock rock yaseBrithani xa i-Animals ibhala. Inguqulelo yabo yafika kwi # 1 e-UK ngoJulayi 9, naseMelika ngoSeptemba 5.
Izilwanyana zaye zayenza le ngoma ngelixesha babekhenketha eNgilane kunye noChuck Berry ngoMeyi ka-1964. Ihambe kakuhle kakhulu kangangokuba bayirekhoda phakathi kokumisa kukhenketho. Kudliwanondlebe no-2010 kunye nezilwanyana ezazikhokela imvumi uEric Burdon, wachaza wathi: '' Indlu yeLanga eliKhanyayo 'yingoma endandisandul' ukuyithanda. Yenzelwe mna kwaye ndiyenzelwe yona. Yayiyingoma emnandi kukhenketho lukaChuck Berry kuba yayiyindlela yokufikelela kubaphulaphuli ngaphandle kokukopa uChuck Berry. Yayiliqhinga elikhulu kwaye liyasebenza. Ngokwenyani yayingelilo iqhinga elihle kuphela, yayiyirekhodi enkulu. '
UBob Dylan waquka oku kwi-albhamu yakhe yokuqala ngo-1962, esebenzisa ulungelelwaniso lwabantu awaluthathayo xa eve uDave Van Ronk eyicula kwaye eyicula 'njengokonakala kwabaninzi abangamahlwempu intombazana . ' Xa Izilwanyana zirekhodile kwiminyaka emibini kamva, yayiluphuculo lokumamela uDylan, owafunda ukuba angabeka isingqisho sedwala kwingoma yomntu. Wathenga isiginci sombane kwaye waqala ukusisebenzisa, edumileyo Ngo-1965 iNewport Folk Festival apho wenza iseti yombane okokuqala.
U-Bob Dylan, owayenomsindo ekuqaleni, wajika waba lilitye, utshilo u-Eric Burdon kwi-Songfacts. UDylan wahamba ngombane kwisithunzi sezilwanyana zakudala 'kwiNdlu yeLanga eliPhakamayo.' '
IiBeatles zaqala ukulawula kwitshathi yazo eMelika xa ' Ndifuna Ukubamba Isandla Sakho 'Baya kwi # 1 ngoFebruwari 1964. Baphinde babetha ngaphezulu kwesihlanu # 1 ngaphambi kokuba' iNdlu yokunyuka 'ibeke ngaphezulu itshathi ngoSeptemba 5, ibetha lonke iqela laseBritane lokuhlasela phezulu ngaphandle kukaPeter noGordon, ochithe iveki e phezulu ngoJuni 'ngeHlabathi elingenaLuthando,' ingoma ebhalwe nguJohn Lennon noPaul McCartney.
Le yayiyeyokuqala kwilizwe jikelele uMickie aveliswa kakhulu. Indoda yaseNgilane, uninzi lwaya eMzantsi Afrika ngonyaka ka-1959 ze benza iqela elibizwa ngokuba nguMickie Most neePlayboys zakhe. Kuba umculo werock wawungafikanga kweli lizwe, uninzi lwazo lurekhoda iingoma ezithandwayo njenge ' UJohnny B. Goode 'Kwaye' Shake, Rattle And Roll, 'uqhuba umtya wokubetha. Ukubuyela kwakhe eNgilane ngo-1962, waguqukela kwimisebenzi yokuvelisa imveliso, kuba kaloku ubuchule bakhe beengoma babuqaqambile eMzantsi Afrika.
Emva kokubona iZilwanyana ziqhuba kwiClub A-Go-Go eNewcastle, waqala ukuvelisa ibhendi; ukurekhodwa kwabo okokuqala yayingu 'Mntwana Makhe Ndikuse Ekhaya,' eyakhutshwa njengeqela lokuqala elinye kwaye yenza i-UK # 21. Okulandelayo yayiyindlu yeLanga eliPhumayo.
Ngokukhawuleza waba ngumvelisi ophambili eNgilane, esongeza uHermits kaHerman, uDonovan, uLulu noJeff Beck kuluhlu lwakhe.
Izilwanyana zirekhode oku ngendlela enye, njengoko beyigqibelele ingoma ekubeni bayenze endleleni. Igubu lezilwanyana uJohn Steel ukhumbula kwi I-1000 UK # 1 Ukubetha nguJon Kutner noSpencer Leigh, 'Sidlale iLiverpool ngoMeyi 17, 1964 emva koko saqhuba saya eLondon apho uMickie (Uninzi) wayebhukishe istudiyo seITV's Ukulungele ukuHamba! Ngenxa yempendulo esasiyifumana 'ekuphumeni kwelanga,' sacela ukuba siyirekhode kwaye wathi, 'Kulungile sizakuyenza kwiseshoni enye.' Simisela ibhalansi, sidlale imivalo embalwa kwinjineli- yayiyinto yemono ngaphandle kokudlula ngaphezulu - kwaye sithathe enye kuphela. Siyimamele kwaye uMickie wathi, 'Yiyo leyo, yinto enye.' Injineli ithe inde kakhulu, kodwa endaweni yokuba asike kancinci, uMickie ube nesibindi esithi, 'Sikwilizwe le-microgroove ngoku, siza kuyikhulula.' Kwiiveki ezimbalwa kamva kwaba # 1 kwihlabathi lonke. Xa sankqonkqoza iBeatles phezulu eMelika, basithumelela incwadi yocingo ethi, 'Halala kwiiBeatles (iqela)'. '
Umvelisi uMickie Uninzi ukhumbula, 'Yonke into ibikwindawo elungileyo, iiplanethi bezikwindawo elungileyo, iinkwenkwezi zikwindawo elungileyo kwaye umoya uvuthuza usiya kwicala elifanelekileyo. Kuthathe kuphela imizuzu eli-15 ukwenza ngenxa yoko andinakuthatha ikhredithi eninzi kwimveliso. Yayiyimeko nje yokuthatha imeko-bume estudiyo. '
Inguqulelo yase-UK yale ngoma iqhuba u-4: 29, owawumde kunayo nayiphi na enye # 1 e-Bhritane ukuya kuthi ga kwinqanaba (uninzi lweemini luye lwangena ngaphantsi kwemizuzu emi-3). Ilebheli yezilwanyana yase-UK, iColumbia, ibingafuni ukuyikhulula ibe nye ngenxa yobude bayo, kodwa umvelisi weqela uMickie Uninzi wayilwela.
EMelika, le ngoma yahlelwa yaya kutsho ku-2: 59.
Izilwanyana zokuqala ezingatshatanga yayiyinto yesiNtu ekudala isithi 'Makhe Ndikuthathe Ndigoduke,' eyafikelela kwi # 21 e-UK nase # 102 eMelika. 'Indlu yelanga eliphumayo' yayingumntu wesibini ongatshatanga, kwaye lowo wabaphula.
Izilwanyana zazinee-14 eziphezulu ezingama-40 e-US, ezaba lelinye lawona mabandla aphumeleleyo eBritane e-United States. Bahlukana ngo-1968 kwimicimbi eyahlukeneyo yomculo kunye neyeshishini. UBurdon uxelele iiNgoma iiNgoma: 'Andicingi ukuba Izilwanyana zinethuba lokuvela. Saba ngabokuqala ukwamkela ukuba sithathe iingoma zeblues ezivela kubazobi baseMelika, kodwa ukuba izilwanyana bezinamathele kunye kwaye zasebenza kunye endaweni yokuxhalaba malunga nokuba ngubani ofumana yonke imali, ngekhe savela ngakumbi kwaye siphume nomculo omninzi wokuzingca. ye. '
Umbutho wezilwanyana u-Alan Price kuphela kwelungu lebhendi elinikwe ikhredithi ngokulungiselela umkhondo, oko kuthetha ukuba uhlawulwa phantse kuzo zonke iirhafu. Inkampani yabo yokurekhoda yaxelela amanye amalungu ukuba akukho ndawo yaneleyo yokudwelisa njengabaququzeleli.
I-solo solo yaphefumlelwa ngu-jazzman Jimmy Smith's hit 'Walk on the Wild Side.' Ixabiso lika-Alan lidlale yedwa kwiVox Continental.
I-Detroit rockers uFrijid Pink wenza uphawu lwayo ngengoma yale ngoma eya e # 4 UK nase # 7 US ngo-1970. EMelika, elinye igcisa elinye latshata ngengoma: Santa Esmeralda (# 78 ngo-1978) noDolly Parton (# 77 ngo-1981). Amawakawaka arekhode le ngoma ibandakanya uRamblin 'Jack Elliott, Dave Van Ronk, The Supremes, The Chambers Brothers, Leslie West, Sinéad O'Connor and Muse.
E-UK, uguqulelo lwezilwanyana lwakhululwa kwakhona ngo-1972 (ukuya ku- # 25) kwaye kwakhona ngo-1982 (# 11).
Emva kokuba iZilwanyana zahlulwe, u-Eric Burdon wakhathazeka kule ngoma kwaye wahamba ixesha elide apho engazange ayenze, esithi 'uyithatha njengengoma.' Uye wenza uxolo nayo, esenza rhoqo ngeendlela ezahlukeneyo.
Iqela lesiNgesi lobugcisa belitye UAl-J wayigubungela le nto ngo-2017 wabo Phola icwecwe. Inguqulelo yabo yahluke kakhulu kolunye utoliko ngokuthandwa ziZilwanyana kunye noNina Simone kangangokuba kungade kubhalise njengoguqulelo lwekhava. Iqela lixelile Zonke izinto ze-NPR ziqwalaselwe :
Besisoloko sizibona ngathi siliqela lomculo, kwaye ke kubonakala kufanelekile ukuzama izandla zethu ngengoma enje. Akukho mntu uyazi ngokuqinisekileyo ukuba le ngoma ivelaphi, kodwa ingxelo yethu isethwe kakhulu eNew Orleans. Ivesi lokuqala ikakhulu livela kwingoma yomdabu, eyesibini yeyethu, ngaloo ndlela ke siqhubeka nenkqubo yokuthatha ingoma, siyitshintshe, siyidlulise. '
Indlu yokuphuma kwelanga
ndingumvukeli ngenxa yokukhaba ngoku ingoma
cus ubenosuku olubi
awundazi ray charles amazwi womculo
izakuba yingoma eqaqambileyo yemihla yelanga